अमेरिकामा ट्रम्पको अन्त्य भएजस्तै नेपालमा ओलीको पनि अन्त्य हुँदैछ: बर्षमान पुन
नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले केपी ओली प्रवृत्तिको अन्त्य हुने बताएका छन् । साेमबार पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै पुनले अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जस्तै ओलीको सर्वसत्तावाद अन्त्य हुन पनि
समय नलाग्ने बताएका हुन् । पार्टीको लाइन सच्याएर जानेभन्दा सबै बुझाइलाई एक ठाउँमा उभिने वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा उनले राखेका थिए । एमालेमा गएका माओवादी नेताहरुलाई फर्काउन प्रयास गर्नुपर्ने पुनले बताए । ‘दलाल
नोकरशाहीका विरुद्ध लड्ने भन्छौं । हाम्रा सबै व्यवहार चरित्र उनी (ओली) सँगै मिल्छन् । यस्तो खालको संस्कार र संस्कृतिबाट समाजवादमा पुग्न सक्दैनौं,’ पुनले भने । यो समाचार कस्तो लाग्छ ? आफ्नो कुनै सल्लाह सुझाव वा
कुनै प्रतिक्रिया भए हामिलाई पठाउन सक्नुहुने छ । सल्लाह सुझाव पठाउन को लागि हामिलाई साथिखबर को पेज मा गएर मेसेज गरि पठाउन सक्नुहुने छ । धन्यवाद !!!